app nyowani inobvumidza apple & apos; s imessage kumhanya pane Android foni
Kuru Nhau & Ongororo App nyowani inobvumira Apple & apos; s iMessage kumhanya pane Android foni
App nyowani inobvumira Apple & apos; s iMessage kumhanya pane Android foni
Kunyange paine vashandisi veApple vanogara vachiisa pasi iOS yeiyo ziviso sisitimu, Siri & apos; inowedzera zvisina kusimba mapoinzi, uye nezvimwewo zvinhu, chinhu chimwe chiri pamiganhu yekukurukura ndiyo iOS iMessage app. Kunyangwe avo vakagadzirisa kuGoogle & apos; s Rich Communication Service (RCS) yakavakirwa Meseji papuratifomu vachiri kuda Apple & apos; s mameseji system panzvimbo. Zvinoenderana AndroidPolice , app nyowani kuvhura nhasi inonzi Beeper inogona kuita kuti zviitike. Haisi & apos; haina nzira yakagadziriswa sezvauchaona. Asi inopa iMessage kugona kune vashandisi veApple panguva imwe chete ichigadzira inbox inbox inovhara akati wandei mameseji maapplication.
Semuenzaniso, Beeper ichagadzira imwe mubhokisi pamwe neyese meseji isina kuverengerwa kubva kumaapps akadai se:
Android Meseji (SMS)
Ese mameseji anotaridzika zvakafanana nekuti zano nderekushandisa imwechete interface kune ese ako machats. Uye hongu Virginia, Beeper inoti inogona kubatana neApple & apos; s iMessage kunyangwe iwe uri kushandisa foni yeApple. Asi kuti izvi zviitike, unofanirwa kushandisa Apple mudziyo sebhiriji. Izvi zvinogona kuitwa uchishandisa imwe yesarudzo mbiri. Imwe nzira inoda kuti iwe uchengete Mac yakamuka uye irambe yakabatana neinternet. Uchishandisa iyo Beeper Mac app, yako Android foni inogona kuve yakabatana neMessage. Nedzimwe nzira, Beeper ichakutumira iyo yakaputsika iPhone 4s neiyo Beeper app yakaiswa kuti ikubatanidze iwe neMessage app. 'Iri harisi dambe,' inodaro webhusaiti yeBeeper & apos; s.
Beeper inokutendera iwe kuchengetedza mameseji kubva akasiyana mameseji mapuratifomu mune rimwe mubhokisi
Kushandisa Beeper kuchakudhurira $ 10 pamwedzi uye neyekupedzisira kugadziridza kwakagamuchirwa neiyo iPhone 4s inoitika mwedzi gumi nemana yapfuura, iwe unofanirwa kushamisika kuti iMessages yako ichave yakachengeteka sei. Kana iwe & apos; tichizama kufunga kuti Beeper yakawana sei iMessage kushanda paApple neWindows, iyi ndiyo mhinduro:
'Ichi chaive chakaoma kufunga! Beeper ine nzira mbiri dzekugonesa vashandisi veApple, Windows neLinux kushandisa iMessage: tinotumira mushandisi wega wega Jailbroken iPhone neiyo Beeper app yakaiswa iyo mabhiriji eMessage, kana kana iine Mac inogara yakabatana neinternet, vanogona kuisa iyo Beeper Mac app iyo inoita sebhiriji. Uku hakusi kuseka, kunoshanda chaizvo! '
Unogona tarisa Beeper & apos; s webhusaiti nekutepa pane iyi link . Uye hauchazofaniri kunzwa wakaderera nekuti yako mameseji app inoshandisa girini matema pane eruvara rwebhuruu.
LG G5 vs LG V10: kutanga tarisa
Mashandisiro ekushandisa Mufananidzo muMufananidzo pane yako iPhone neIOS 14
Iyo yakanakisa yeMicrosoft Surface Duo dhizaini asi ichiunza iyo mbiri-skrini chishandiso pasi kusvika $ 550 (nyowani nyowani)
iOS 14.2 yekuvandudza beta inosunungurwa; zvinorevei iwo marangi eorenji uye egirini pane yangu iPhone skrini?
LG V20 inowanikwa nhasi muzvitoro zveAT & T